Thenga i-Black Shark 2 eSpain: ixabiso kunye nezizathu zokwenza | I-Androidsis
Izizathu ezi-3 zokuthenga iBlack Shark 2 Pro, ngoku iyafumaneka eSpain
Ekuqaleni kukaSeptemba odlulileyo, sikwazile ukukuqinisekisa oko Ifowuni yemidlalo yeXiaomi yayiza kufika eSpain kungekudala. Kuthethwe kwaye kwenziwa: ungagqibela thenga iBlack Shark 2 Pro eSpain. Kodwa ngaba kufanelekile ukuthenga kwakho? Sithetha ngexesha apho kukho ezinye iindlela ezintle, kungoko kufanelekile ukujonga ezinye iindlela.
Impendulo ilula kakhulu: ukuba ungumdlali weqonga ongenanto, okanye ujonge ifowuni enamandla yoyilo olwahlukileyo kolunye. Ungathandabuzi, kuba ukuthenga iBlack Shark 2 Pro yeyona ndlela ilungileyo onokuyijonga. Kwaye ezi zizizathu zayo.
1 Uyilo olundlongondlongo kwaye lwahlukile kwezinye
2 Isikrini esinye ukubalawula bonke
3 Isixhobo esinezixhobo ezide
Uyilo olundlongondlongo kwaye lwahlukile kwezinye
Esinye sezizathu eziphambili zokuba kuthengwe iBlack Shark 2 Pro ngumbono ogqwesileyo, uyilo lwayo. Sithetha ngemodeli efikelela kwintengiso ifumaneka ngee-shades ezintathu: emnyama naluhlaza (Shadow Black), luhlaza nangwevu (Iceberg Grey) nohlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji (Gula Blue). Ukongeza, inembonakalo enobundlongondlongo eya kuyenza ibe liziko lawo onke amehlo.
Ungayichazanga eyakhe inkqubo yokuhambisa ubushushu, ke unokuchitha iiyure kunye neeyure unika i-Fortnite okanye i-Call of Duty Mobile, ngaphandle kokukhathazeka malunga neengxaki zokufudumeza. Ngale ndlela, ukuba ufuna imodeli eyahlukileyo kwezinye, awuyi kuzisola.
Isikrini esinye ukubalawula bonke
Esona sizathu siphambili sokuthenga i-Black Shark 2 Pro ngumbono omkhulu, inento yokwenza necandelo le-multimedia. Ukuqalisa, khwela Iphaneli eyi-6.34 intshi ye-Super AMOLED efikelela kwisisombululo esipheleleyo se-HD +. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into eqhelekileyo, akunjalo? Kodwa ukuba sidibanisa itekhnoloji ye-DC Dimmin 2.0, enciphisa ukubengezela kwesikrini kumanqanaba okukhanya okuncinci, enikezela ukuya kuthi ga kwi-430 nits kunye nomlinganiso okwahlukileyo we-60.000: 1, izinto ziyatshintsha.
Akwanelanga wena? Ewe, uyazi ukuba uyintoni Ifowuni yokuqala kwintengiso inezinga lokuhlaziya le-240 Hz. Ukongeza, ukuba yi-smartphone yokudlala, kuyinyani ukuba uya kuhlala ucofa isikrini, yiyo loo nto ke beongeze itekhnoloji ye-Magic Press 2.0, enika i-touch latency ye-34.7 ms kuphela. Akukho mdlali uza kukusinda!
Isixhobo esinezixhobo ezide
Kwaye uthini nge Iimpawu zobugcisa zeBlack Shark 2 Pro. Ngaphantsi kwe-hood, iyadlala iprosesa ye-Snapdragon 855+, kunye ne-8 okanye i-12 GB ye-RAM kunye ne-128 okanye i-256 GB yokugcina kunye netekhnoloji ye-UFS 3.0, ke ifowuni ayizukubaleka, iyakubhabha! Kule nto, kufuneka songeze i-4.000 mAh ibhetri nge-27 W yokutshaja ngokukhawuleza, kunye nemveliso ye-3.5 mm jack eya kukuvumela ukuba uyonwabele imidlalo yakho ngaphandle kokuphazamisa nabani na.
Thenga iBlack Shark 2 Pro ngexabiso elihle kwiAmazon
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Izizathu ezi-3 zokuthenga iBlack Shark 2 Pro, ngoku iyafumaneka eSpain
I-OPPO K5: Uluhlu oluphakathi lwebrand entsha lusemthethweni
Ungasusa njani ii-imeyile kwi-Gmail ukuze ufunde kamva